Sakafo sy sakafo - Vondt.net - Pejy 16 amin'ny 16
Ahoana ny fomba hanamaivanana ny vintana amin'ny aretina voa
02 / 11 / 2015 /Fanamarihana 0/i Sakafo sy sakafo/av loza
Ny voa dia mikarakara anao amin'ny fanesorana ny fako amin'ny vatana, mampihetsika ny vitaminina D ary mandrindra ny ranao. Ireto misy fomba 9 ahafahanao mamaly ilay serivisy.
Ny voa dia voa endrika be sy miorim-paka izay miady isan'andro mba hampifandanjana ny vatanao. Ny voa dia maka ny ra izay misy menaka fako. Nopotehina tahaka ny urine avy eo ny fako. Izy ireo koa dia manampy amin'ny fifehezana ny tosidra amin'ny alàlan'ny fifehezana ny sira sy ny rano amin'ny vatana.
- Ny tena fiasan'ny voa
Ny fiasan'ny voa dia ny fitazonana ny fifandanjana ao amin'ny vatana (homeostasis).
Ny rafitra filtration ny vatana - Manala ireo vokatra fako amin'ny lalan-drà
Manamafy ny tsindry finday sy ny habeny
Izy no mifehy ny habetsaky ny ion amin'ny tsiranoka sela
Andraikitry ny mizana asidra / base (pH) ao amin'ny ra
Ny gliokao amin'ny tahiry azo avy amin'ny akora (tsy anisany karbôgria)
Famokarana hormonina EPO
Mamadika ny vitaminina D tsy mihetsika amin'ny endrika mavitrika
Famokarana renin - izay mifehy ny tosidra
Araka ny hitanao dia manao asa be ao amin'ny vatanao ny voa, ary azo atao ve ny manome valisoa azy ireo amin'ny fepetra tsara hanatsarana ny fahasalamana voa?
Fepetra tsotra 9 hanatsarana ny fahasalaman'ny voa
Mihinana salama - Mifantoha amin'ny voankazo, voaroy (anisan'izany ny ranom-boankazo), legioma, voanjo ary hena mahia
Fanatanjahan-tena tsy tapaka - Ny fanatanjahan-tena dia mandray anjara amin'ny fahasalamana amin'ny aretim-po tsara sy ny fifindran'ny ra tsara kokoa
Na siramamy ra aza - Sorohy ny mamy be loatra amin'ny fiainana andavanandro. Siramamy marobe dia mandefa siramamy ao anaty sy ambany
Zahao ny tosi-dranao - Araho amin'ny dokotera ny tosidranao
Ahenao ny fihinanana sira ary misotroa rano tsy tapaka - Ny fihinanana rano ara-dalàna dia miantoka ny 'hamelana' ny voa
Halaviro ny fanaintainana tsy fanaovana fanafody be dia be sy fanafody hafa - Mety ho mafy amin'ny voa izany
Mankanesa amin'ny fizahana momba ny fahasalamana ho fizahana ny fiasan'ny voa
Raha manana ianao olan'ny voa amin'ny fianakaviana tokony handeha amin'ny fisavana matetika ianao
Ireto misy fomba tsotra hitazonana ny voa tsara. Ny olana fotsiny dia matetika isika no mandray an-tanana ny voa ary noho izany hadinontsika fa mila fikarakarana kely amin'ny fiainana andavanandro koa izy ireo. Andramo ireto dingana tsotra ireto ary omeo ny fanomezana ho avy anao amin'ny andro ho avy amin'ny fiainanao.
- Vakiana ihany koa: Tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fahasalamana mavokely Himalayan sira
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/female-doctor-with-glasses-bw-600.jpg?media=1648573622 389 650 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2015-11-02 22:47:512015-11-02 22:49:24Ahoana ny fomba hanamaivanana ny vintana amin'ny aretina voa
Ny mampihena dia mampihena ny fanaintainan'ny hozatra.
10 / 09 / 2015 /Fanamarihana 0/i Sakafo sy sakafo, Training/av loza
Ny hihina dia mety mampihena ny fanaintainana ary mampihena ny fanaintainan'ny hozatra. Ny voka-dratsin'ny fanaintainana dia azo amin'ny alàlan'ny fihinanana maina goavambe na fitsaboana mafana. Mampiseho fanadihadiana navoakan'i Black et al ao amin'ny Journal of Pain in 2010.
Ginger - voaporofo ihany koa ankehitriny fa misy vokany amin'ny olombelona
Ny sakamalao dia nampiseho fiatraikany anti-milaza zavatra amin'ny fandinihana biby, fa ny vokany amin'ny fanaintainan'ny hozatry ny olombelona dia tsy azo antoka teo aloha. Nisy koa nanolo-kevitra fa ny fitsaboana hafanana ny sakamalao dia hahatonga azy io hanamaivana ny fanaintainana fanampiny, saingy lavina amin'ity fandinihana ity - satria ny vokany dia nitovy ihany tamin'ny fihinanana sakamalao manta na hafanana.
Ny tanjon'ity fanadihadiana ity dia ny fanadihadiana ny vokatry ny fihenan'ny ginger mihoatra ny 11 andro ary ny fiantraikany amin'ny fanaintainan'ny hozatra. Ny fandalinana indroa, roa-jamba dia nizara ho vondrona 3;
(1) sakamalaho anana
(2) Hajaina mafana
Ireo mpandray anjara tamin'ny vondrona roa voalohany dia nihinana sakamalao 2 grama isan'andro nandritra ny 11 andro misesy. Tsy maintsy nanao fanazaran-tena 18 ihany koa izy ireo tamin'ny elatry ny kiho mba handrisihana ny be loatra - izay nahatonga ny fanaintainana sy ny fivontosana tao an-toerana. Ny haavon'ny fanaintainana sy ny anton-javatra maro hafa miovaova (ezaka, haavon'ny prostaglandin, habetsaky ny sandry, ny fivezivezena ary ny tanjaka isometrika) dia refesina alohan'ny sy 3 andro aorian'ny fampiharana.
Voka-tsoa avy amin'ny fandinihana: Ny tsingerina dia fanaintainana voajanahary
Samy nahazo valiny mitovy ihany ny vondrona 1 sy ny vondrona 2 rehefa nahatsapa alahelo tamin'ny hozatra voakasik'izany izy ireo raha oharina amin'ny vondrona plasebo. Ny fehin-kevitra dia ny hoe ny ginger dia ny fanaintainana voajanahary izay mety hahasoa isan'andro. Taloha taloha dia voaporofo koa izany Ny menaka dia afaka mampihena ny fahasimban'ny atidoha amin'ny alàlan'ny fivontongana iskemia. Ny valim-panadihadiana tsara dia vita ihany koa rehefa tonga amin'ny fanaintainana avy amin'ny fanaintainan'ny aretin-taolana.
Dite ginger na kari thai
Raha tsy tianao loatra ny sakamalao, dia manoro hevitra anao izahay mba hanamboatra dite misy sakamalao sy sokay - na mety hokapainao ho farantsa kely ary ampidiro amin'ny karizo Thai maitso tsara na mitovy aminy.
Tianay ny handre avy aminao ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra raha manana soso-kevitra tsara ianao momba ny sakafo voajanahary na ny fomba fanolorana.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Ingefær-Naturlig-smertestillende.jpg?media=1648573622 356 600 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2015-09-10 14:07:342015-09-10 14:07:34Ny mampihena dia mampihena ny fanaintainan'ny hozatra.
Pejy 16 amin'ny 16«<141516